C-20 profiled 1100 - a impahla yokwakha isebenziseka ngezindlela eziningi, zihamba phambili ngabathengi. It has a ebusweni trapezoid ubambo futhi ezenziwe ngensimbi lashukumisa indlela abandayo. Profiled C20 Ukucaciswa futhi izici evumela ukusetshenziswa kwayo ukwakhiwa ahlukahlukene, ethandwa kakhulu phakathi kwazo zonke izinhlobo amashidi.
Labelling kanye nephrofayili Ukwakheka ipuleti
decking Universal ine wokugubha: C-20, 1100. Le ncwadi C kusho "udonga", izinombolo 20 - iphuzu ukuze ukuphakama amaphiko 1100 - zimelela ububanzi web ewusizo. Iphrofayela Brand siqukethe ishidi steel, i-zinc noma polymeric ungqimba zokuzivikela, primer enamathela anti-ezonakalisayo.
Profiled libhekene izakhiwo ezinjalo eziyisisekelo:
isisindo okuphansi. isakhiwo esakhiwe zilula. Abanaso ukudala umthwalo omkhulu phezu kwesisekelo noma umthwalo esindayo izindonga.
Intengo Okuphansi. Izindleko zalolu hlobo of lukathayela ishidi lashukumisa ivela 160 deda m 2 ngalinye, futhi camera - kusukela RUB 206 m 2 ngalinye.
ukuphila isikhathi eside. Ukuze kukhiqizwe C-20 metal amashidi esetshenziswa izinga steel ishidi, odlulayo ugingqe abandayo, ngakho ukwakheka kwama-molecule ayo lingabulewe. I amashidi kungukuthi ngaphansi ukugqwala, liphathwa eliphezulu upende kwenziwa. Ngokweyame ezinhlinzekweni obandayo esaphila ubuchwepheshe impahla uneminyaka engu-30.
Ukufaka okulula. Uma usebenzisa C20 ibhodi lukathayela, izici lobuchwepheshe yalolu hlobo neqhaza ukufakwa okusheshayo futhi elula. ukufakwa kwalo aludingi amathuluzi akhethekile. Ukuhlela ezicijile ebhodi lukathayela kufanele acabangele windage kocingo kudala umoya ukumelana naso futhi kwenze kungaholela ukwehlukana amashidi.
asezingeni elifanele. C emise ishidi 20 has a ebusweni izinga okusezingeni evimbela ekuqongeleleni uthuli nezibi ahlukahlukene nokubuyisa lemukelekako.
Profiled C20 Ukucaciswa uvumele ukusebenzisa wonke embonini yezokwakha. Ngekusetjentiswa yayo umkhiqizo:
ophahleni decking - inhlangano usebenza ukulungele likhreyithi stepper ibanga 40 cm;
ngombala gable - the ukukhweza amashidi kungaba ngesimo i ukwakhiwa ezimele noma phezu ulwelwesi ubudala;
Surface izakhiwo sekugcineni-bhila nezakhiwo;
udonga nophahla - ukufakwa ibhodi lukathayela le njongo zingaba nokusetshenziswa nangokuvikela izinto noma ngaphandle kwabo;
ukukhiqizwa izindonga zangaphakathi nezangaphandle zonke izinhlobo izinjongo;
ka lukathayela ezicijile ibhodi, izithiyo - Kwenziwa ekhethekile yasibamba nezikulufi nezihluthulelo noma izipikili.
Profiled C-20 - lokhu indaba for izindonga, esetshenziselwa esehlanganise izakhiwo, mbumbulu kanye ezindongeni zezakhiwo, kanye ukwakhiwa uthango ezicijile ahlukahlukene. Ngenxa ukuphakama kwalo ngamagagasi it has a load yakho iphezulu kakhulu ethwele amandla nokuqina. Leli shidi okwenyanga neze deforms lapho vibration noma ingcindezi kuso kwezulu. Ukuze ekwelapheni ebhodi lukathayela usebenzisa polymers ezifana pural, i-polyester, plastisol, okwenza kube onamandla nakakhulu.
ishidi Ububanzi obugcwele kuyinto 11.5 cm; wave ukuphakama 0.2 cm; ukusebenza ububanzi 11 cm; ukujiya kuhluka 0,045 ukuze 0,07 cm; stiffeners ahlelwe ngesikhathi pitch ka 13,75 cm; ubude ubuncane kokuqendwa ishidi 50 cm, max - 120 cm.
Profiled ishidi uphawu C-20 izinto ezihlukahlukene wemibala ase lwemibhalo. Ngaphezu imibala ehlukene, ungakwazi ukuthenga zangaphambi ngesineke ngaphansi itshe noma ukhuni decking C20. Ukucaciswa, ukubuyekezwa zazo zinhle kakhulu, ukuhlangabezana nemithetho.
Ukwahlukanisa profiled usayizi ishidi nesisindo
ukujiya profiled, mm
1 m / n ubude
1 m 2 endaweni ezisebenzisekayo
Ukukhetha amashidi ukujiya C-20 okumelwe icatshangelwe kahle lapho izosetshenziswa.
Uma usebenzisa i-profiled C20 Ukucaciswa oyoziletha isakhiwo izimfanelo ezinhle ezifana:
Ukukhetha enkulu imibala;
nemibi metal amashidi
Ngaphezu kwalezi zimo ezinhle eyayikuzo, le nto has ezithile ezingathandeki:
nozwelo umonakalo ngemishini;
hhayi ukumelana ukugqwala;
izindawo ezilimele ngokushesha adle.
Faka decking C20, izithombe okuyinto okusesihlokweni esithi, kudingeka ngokucophelela nangokuqondile wena. Ukufakwa wenziwa usebenzisa washers ezikhethekile noma gaskets. It is nhlobo ukulungisa ngezipikili, ngenxa yale njongo, ngezikulufo, izipikili noma imishudo.
Faka amashidi yanconywa kweqa, lokhu kuzobenza bakwazi ukuhlala eduze komunye nomunye, ukwandisa rigidity kanye ukumelana weathering.
Isikhala seso phansi efudumele ngaphansi linoleum
Imihlangano yokudla. Ukubamba ku-feeder